Sakafo 400 kaloria: ahoana izany, sakafo isan'andro sy isan-kerinandro | Nutri Diet
Ity dia sakafo natokana ho an'ny olona te ho very ireo kilao fanampiny. Ity dia regimen izay hampidiranao sakafo kely, hahafahanao manary lanja eo anelanelan'ny 4 ½ sy 5 os kilao ao anatin'ny 10 andro. Tsy maintsy fehezinao ny kaloria ampidirinao satria tsy mihoatra ny 400 izy ireo.
Raha tapa-kevitra ny hampihatra an'ity sakafo ity ianao dia tsy maintsy salama ara-pahasalamana, misotro rano betsaka araka izay azo atao isan'andro, manandrana ny fampidiranao zava-mamy ary manaova sira sy menaka oliva fotsiny ny sakafo atoandro.
1 Ohatrinona ny laninao amin'ny sakafo kaloria 400?
2 Menio isan'andro
3 Menu isan-kerinandro
Ohatrinona ny laninao amin'ny sakafo kaloria 400?
Marina fa amin'ny sakafo toy izany dia ambany kokoa ny kaloria noho ny eritreretintsika. Ka raha manaraka ny drafitra amin'ny taratasy isika afaka miala eo amin'ny 4 na 5 kilao isika isan-kerinandro. Fa eny, tsara kokoa ny manao sakafo kaloria 400 mandritra ny 8 na 10 andro fotsiny.
Aorian'izay dia afaka mampiditra habetsaka bebe kokoa isika fa hatrany kosa amin'ireo sakafo atolotray. Amin'izany fomba izany, ny vatana dia mamoaka ny otrikaina, proteinina na vitamina ilainy, saingy mifehy hatrany ny resaka lanjany.
Desayuno: 1 fangaro amin'ny safidinao voapaika amin'ny ronono an-tsokosoko sy toastasy manontolo.
Midmorning: Yaorta ambany tavy 1 misy voankazo.
sakafo atoandro: savony ligth, 1 hanompoanao salady legioma manta ary voankazo 1 safidinao. Afaka misotro ny habetsaky ny ron-kena tianao ianao.
Afak'andro tolakandro: Ranom-boasary na grapefruit 1 vera.
fitsangatsanganana: 1 fangaro amin'ny safidinao voapaika amin'ny ronono an-tsokosoko sy biskoy rano 2 na bran kely.
sakafo hariva: savony ligth, 50g. akoho, trondro na hena, 50g. fromazy ho an'ny salut, ampahany amin'ny salady mifangaro ary gelatin maivana 1. Afaka misotro ny habetsaky ny ron-kena tianao ianao.
avy eo ho an'ny sakafo hariva: fampidirana 1 safidinao.
Ireo karazan-tsakafo ireo, izay hiresahantsika ny fanampiana kaloria kely amin'ny vatana, dia tsy maintsy atao ara-potoana. Izany no mahatonga ilay antsoina hoe sakafo haingana. Inona no ho azontsika amin'izany? manala kilao fanampiny vitsivitsy. Fa marina fa satria tsy mitovy ny vatana rehetra, indraindray isika mety ho very mihoatra ny noeritreretintsika. Mazava ho azy fa tsy tokony hihinan-kanina loatra toy izao isika. Aleo foana manao azy mandritra ny andro vitsivitsy dia mihinana tsy tapaka fa salama sy mandanjalanja foana hitazomana ny lanjanay.
Avelanay miaraka amin'ny menio isan-kerinandro ianao mba hahafahanao mampihatra sakafo kaloria 400 amin'ny fomba mahomby sy mora:
Sakafo maraina: voa kely vitsivitsy misy ronono skim 200 ml.
Mamatonalina: Paoma iray
Sakafo: lovia salady sy kôkômbra mahafinaritra
Snack: jelly maivana
Sakafo hariva: takelaka broccoli masaka miaraka amin'ny yaourt skim
Sakafo maraina: atsofohy sy sombi-mofo masaka varimbazaha miaraka amina eran'ny sotrokely
Sakafo atoandro: lasopy lovia iray misy paty varimbazaha feno vitsivitsy
Snack: yaourt skim
Sakafo hariva: akoho 75 grama misy salady mifangaro
Sakafo maraina: atsofoka na kafe irery miaraka amin'ny mofo varimbazaha manontolo ary tratra vonoina vorontsiloza roa
Mamatonalina: voankazo iray
Sakafo atoandro: hena 95 grama namboarina miaraka amin'ny salady voatabia sy epinara
Snack: kaopy frezy iray
Sakafo hariva: salady mifangaro, miaraka amin'ny fromazy kely sy jelly kely
Sakafo maraina: ronono an-tsiranoka misy voamaina iray manontolo
Sakafo atoandro: voanio misy chard
Snack: voankazo na jelly
Sakafo hariva: lasopy legioma maivana sy yaourt skim
Sakafo maraina: vera misy ranom-boankazo na kafe voajanahary na fampidirana miampy voamaina iray manontolo
Sakafo: salady iray misy trondro namboarina na steamed 125 grama.
Snack: boaty sôkôla tsy miova
Sakafo hariva: salady miaraka amin'ny epinara, tsimoka tsaramaso ary voatabia na karaoty. Azonao atao ny manaingo azy amin'ny ranom-boankazo sy menaka oliva iray sotro.
Sakafo maraina: dite maitso misy vera misy mofo roa vita amin'ny varimbazaha manontolo
Mamatonalina: kaopy frezy
Sakafo: turkey 100 grama miaraka amin'ny broccoli misy steamed
Sakafo hariva: lasopy legioma sy yaourt
Sakafo maraina: iray vera vita amin'ny ronono na fampidirana ary cookies roa tsy misy siramamy
Sakafo: vary an-tsokosoko 20 grama misy katsaka na epinara
Sakafo hariva: Salady Arugula sy seleria miaraka amin'ny fromazy vaovao.
Tadidio fa tokony hisotro rano be ianao ary ny fampidirana dia amporisihina isaky ny tianao. Azonao atao koa ny mandray ny ron-kena maivana vita an-trano rehefa mila ianao. Ny salady ary koa ny trondro na hena dia azo asiana zava-manitra. Rehefa mahandro dia azonao atao ny manampy menaka oliva iray sotro, na amin'ny mitataovovonana na amin'ny sakafo hariva, izany hoe roa sotro fihinanana iray isan'andro. Tsy sakafo atoro ho an'ny olona mandany angovo be io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Sakafo 400 kaloria
Kaloria 400? Io no zavatra mampihomehy indrindra henoko ary amiko dia tsy tompon'andraikitra indrindra fa navoaka an-tsokosoko tao amin'ny Internet ity karazana atosika ity ary fako ity sakafo ity na dia mety ho 5 kilao aza ny olona antonony afaka herinandro nefa tsy miahiahy aho fa tavela eo amin'ny tsiranoka rehetra amin'ny vatana izay sitrana ianao afaka andro vitsivitsy, ankoatry ny fanimbanao ny metabolisma ataonao ho milina miadana ary amin'ny fotoana maharitra dia tsy azo atao ny manary lanja bebe kokoa raha tsy te-hahita ny tenanao ao amin'ny taolana tsy misy ianao misy hozatra. tsara kokoa ny midina tsikelikely ary tsy miraharaha an'ity karazana sakafo tsy mety ity.
manasitrana dia hoy izy:
Ny marina dia amin'ny alàlan'ny fametahana multivitamins hahazoana antoka ny fihinanana micronutrients isan'andro, izay sakafo voafetra dia miasa mandritra ny fotoana fohy, na inona na inona nohaninao (na dia burger matavy 400-calorie isan'andro aza). Na izany aza, ny fihinanana voankazo sy legioma dia tena mahasoa amin'ny fahasalamana satria manana ilay antsoina hoe «fitoleutrients» izy ireo. Ity sakafo ity dia miasa raha jerena fa ny vatan'ilay lohahevitra dia manana tavy voahangona azo atao mba hanefana ny tsy fahampian'ny kaloria. Ny zavatra hendry indrindra tokony hatao dia ny miantoka ny fihinanana proteinina manodidina ny 1g x lanjan'ny vatana ary manampy amin'ny fampihetseham-batana, mba hitazomana ny vatan'ny mahia. Etsy an-danin'izany, ny fiatraikan'ny fihomboana dia tsy inona fa ny fihinanana indray, mihoatra ny kaloria ilain'ny vatana, noho izany ny fihinanana sakafo mampiavaka ireo izay narahin'ny fanabeazana famerenana sakafo dia tsy hitondra vokadratsin'ny fihemorana ratsy.
Mamaly an'i Sane
Candice dia hoy izy:
Mahafinaritra izany! Nanova zavatra vitsivitsy aho ary narahiko izany fa tsy nandeha mihoatra ny kaloria 400, very 5 kilao aho tao anatin'ny 10 andro voalohany ary 4 tao anatin'ny 10 andro hafa tamin'ny sakafo mitovy! Mikasa ny hanaraka azy mandritra ny 10 andro fanampiny aho hamita ny volana 🙂
Valiny tamin'i Candice
Catalina dia hoy izy:
Raha te hihena ianao dia mitsidiha mpitsabo matihanina.
Ireto sakafo ireto dia tsy misy ilana azy ary mampidi-doza ho an'ny vatanao.
Ilaina ny fanabeazana sakafo mba hahombiazan'ny drafitry ny sakafo. Henoy aho! dia ny torohevitro amin'ny maha matihanina amin'ny fahasalamana ho avy.
Valiny tamin'i Catalina
Mampihoron-koditra ny fisian'ny karazan'ity famoahana ity ho an'ny olona!
Tsy misy olombelona afaka mihinana an'io sakafo io! Ny rano very fotsiny dia very, ary tsy ho ela intsony vao haverina. Tsy mandeha fotsiny izany, fa mandrahona ny fahasalamana ary tsy manana fanekena siantifika.
cyan dia hoy izy:
Ny fitsidihana ny manam-pahaizana manokana sy ny fanaovana sary miaraka ny sakafo voalanjalanja natao ho anao sy ny filanao no safidy tsara indrindra.
Mazava ho azy fa misy karazana sakafo atolotra amin'ny Internet.-
Valiny tamin'i Cyn
Blogichics.com dia hoy izy:
Sakafo sarotra io satria tsy mahafa-po tanteraka ny otrikaina ilaina izay tokony hohanintsika isan'andro.
Valiny amin'ny Blogichics.com
do dia hoy izy:
RATSY REHETRA, ENGY IREO MBOLA HANAM-BOLA
Mamaly an'i del
Renee dia hoy izy:
Eny, tsy manana zavatra tsara kokoa tokony homena izy ireo, aza manome hevitra.
Mamaly an'i Reny
Ity sakafo ity dia natao ihany ho an'ny olona manana BMI lehibe mihoatra ny 80, izany hoe, manodidina ny 100 ka hatramin'ny 150 kilao ny lanjany.
Violet Chaparro A dia hoy izy:
Ny marina dia manana olana lehibe amin'ny dislipidemia aho ary tsy misy na inona na inona, na dia ireo fanafody aza, izay nanampy ahy hifehy ny haavony.
Amin'ny sakafo tsy misy gluten na lactose ary voankazo vitsivitsy ihany, rano be ihany.
Manantena aho fa manampy ahy hahazo izany.
Valiny tamin'i Violeta Chaparro A
Marta Mora Santamaria dia hoy izy:
Ny ohatra tonga lafatra fa ny fihenan-danja dia tsy mitovy amin'ny fahasalamana. Tsy salama izany ary mampidi-doza, atsaharo ny fandaingana amin'ny Internet. Amin'ny maha-mpianatra mpitsabo anao ary olona iray efa teo amin'ny tontolon'ny fampihetseham-batana efa ela, raha te hihena ianao dia mihinana sakafo voalanjalanja, miaraka amin'ny tavy feno voka-tsoa (aza adino fa ilaina ny tavy fa ny mahasalama kosa tsy matavy. ), gliosida mahasalama ary tsy misy kaloria poakaty, proteinina (vao mainka maniry hahazo tavy). Ataovy ny fototry ny sakafonao dia voankazo, legioma ary legume, trondro manga ary, na dia misy proteinina betsaka aza ny hena mena, dia salama kokoa hatrany ny hena fotsy. Ataovy zava-pisotro lehibe indrindra ny rano ary ataovy ny fisotroana zava-pisotro misy siramamy miavaka indrindra Izany rehetra izany dia ampiarahina amin'ny tsy fahampian'ny kaloria sy ny fampihetseham-batana (asa hery + cardio). Ny fihenan'ny lanjany mahasalama dia mandroso hatrany ary mahafa-po, ity sakafo voalaza eto ity dia vokany "boom" fotsiny, hahatonga anao hihena amin'ny fomba tsy mahasalama ao anatin'ny roa andro ary dia hijanona ho toy izany hatrany ny zava-drehetra. Tsy mendrika hanaovana risika ny fahasalamanao izany.
Valiny tamin'i Marta Mora Santamaria